Faallooyinka qasabadda Musqusha Delta
2021 / 02 / 03 QoondayntaTilmaamaha qasabada 877 0
Marka ugu horeysa ee aad jaleecdo gurigaaga, waxaad arkaysaa qaab guud iyo fikrad. Haddii aad hiigsaneysid muuqaal casri ah, mid dhaqameed, mid dhaqameed, ama mid casri ah, gurigaaga ayaa ku siinaya muuqaal kacsan markii aad albaabka ka baxeyso.
Markaad si dhow u fiirsato, hase yeeshe, waa dhammaan faahfaahinta isku dhafan si ay qaabkaaga u soo noolaadaan. Tubooyinkaaga ayaa ka mid ah faahfaahinta muhiimka ah ee kushiinkaaga, iyo sidoo kale musqushaada.
Markaad raadineyso qasabadaha saxda ah, tayada waa tixgelin muhiim ah maxaa yeelay cidina ma rabto inay bedesho qasabadooda dhowrkii sanaba mar. Hal hogaamiye ayaa ka sarreeya inta kale marka ay timaado tayada: Delta Faucet.
Faa'iidooyinka Iibsiga qasabadaha Delta
Delta Qasabadaha ayaa had iyo jeer safka hore kaga jira hal-abuurnimada qasabadda. Waxay soo saareen tikniyoolajiyada sida Touch2O, dareemayaal taabasho oo qasabadda fura oo damiya. Iyagu sidoo kale waa indheer garad ka dambeeya MagnaTite Docking, kaas oo adeegsada birlab si uu u sugo madaxa qasabadda marka aanad isticmaalin tuubada la dheereeyay. Mid ka mid ah tikniyoolajiyadooda ugu hal abuurka badan waa H2Teknoolojiyada Okinetic, hal-abuurnimada madaxa qubeyska ee ilaalisa biyaha iyadoo ka dhigeysa inaad dareento inaad ku raaxeysaneysid qubays heer sare ah.
Marka laga hadlayo astaamahooda gaarka ah, Delta Faucet waxay isku daraysaa dhismo tayo sare leh iyo damaanad qaad nololeed oo xadidan dhammaan alaabooyinkooda. Waad ku kalsoonaan kartaa inaad heleyso wax soo saar aad u wanaagsan, oo haddii cillad naadir ah ay dhacdo, Delta ayaa daboolay.
Iyada oo la adeegsanayo liistada ballaaran ee Delta Faucet ee alaabooyinka, in kastoo, sidee ku ogaan kartaa kuwa ku habboon gurigaaga? Aynu ku quusno xulashadeena ugu sarreeya alaabada Delta Faucet ee jikadaada iyo musqusha.
Top tubbada Musqusha Delta
Musqushaadu waa oasis aad ku nasato kalinimada, laakiin shey kasta oo qolka ku jira saamayn ayuu ku yeelan doonaa dareenka iyo qaabka aad abuurtay. Doorashada qasabada saxda ah waxay ku siineysaa muuqaalka ugufiican adoo khibrada ka dhigaya mid sahlan oo sahlan sida ugu macquulsan. Hadaad ugaarsi ugu jirto qasabadaas saxda ah, hubi xulashadeena ugu sareysa qasabadaha musqusha Delta ugu fiican.
Muuqaal casri ah wuxuu ku saabsan yahay nadiif, xariiqyo jilicsan, iyo jawiga ka wanaagsan ee aad ku leedahay musqushaada marka loo eego nadaafadda? Waxaad ku adkaan laheyd inaad hesho qasabado badan oo leh muuqaal ka casrisan kan Casri Qolka Musqusha ee Hal Hole Casri ah 567LF-PP.
Lahara wuxuu ka mid yahay qasabadaha musqusha ee Delta ugu caansan, wuxuuna ku yimaadaa qaabab kala duwan. Waxay kuxirantahay qaabka aad rabto iyo qaabeynta miiska dushiisa ama wax aan waxba tarayn, the Lahara Fiditaanka 3-dalool ee Musqusha Musqusha 3538-CZMPU-DST waxay noqon kartaa taam ku habboon.
Waxaad jeceshahay qaabka Lahara laakiin waxaad horay u rakibtay miiska musqusha oo wuxuu leeyahay qaabeyn seddex god leh, oo aan aheyn mid baahsan. Nasiib kama tihid, maxaa yeelay Delta wuxuu leeyahay Lahara Centerset Musqusha Qasabada 2538-CZMPU-DST sidoo kale.
4. Qasabada Musqusha ee Xarunta Haywood
Dhammaan qasabadaha ku jira liistadayada illaa iyo hadda waxay ku sugnaayeen meel casriga ah ama casriga ah. Haddii aad doorbideyso muuqaal dhaqameed badan, the Qolka Musqusha ee Haywood Centerset Chrome 25999LF waxay noqon doontaa midigtaada.
5. Lahara Single Hole Bleroom Musqusha
Musqulaha meelaha yar yar ama qolalka budada ah, rakibida hal-god ayaa caadi ah. Haddii aad u maleyneysay inay ka qaaday Lahara caanka ah tixgelinta musqushaada, mar kale ka fikir oo fiiri Lahara Single Hole Musqusha Musqusha 538-CZMPU-DST.
Aasaasiyadu Qasabadaha Gacanta Keli ah lagu Qabto
Qof kastaa ma doonayo in qasabaddiisu ay qayb muhiim ah ka ahaato muuqaalka musqusha. Haddii aad si fudud u rabto aasaas, shaqeyn, qasabad tayo sare leh, waxaad tahay musharaxa ugu fiican ee Aasaasiyadu Qasabadaha Gacanta Keli ah lagu Qabto.
Tagtubooyinka musqulaha	Hore:: Sida loo Nadiifiyo Matte Qasacadaha Madbakha Madoow Next: Faallooyinka qasabadda Delta jikada: 2021 Tilmaamaha Iibsiga ee qasabadaha Delta jikada
2021 / 05 / 13 1073